Nhau - Tora chikamu muhunyanzvi EPS kuratidzwa
Mumakore apfuura, isu takatora chikamu mune nyanzvi EPS muchina kuratidzira muJorodhani, Vietnam, India, Mexico uye Turkey etc. Nyika. Tichitora mukana wechiratidziro, takasangana nevatengi vazhinji vakatotenga michina yeEPS kubva kwatiri kunyangwe vasina kumbosangana, zvakare takasangana nevamwe shamwari nyowani vane hurongwa hwekuvaka matsva ePSS. Kuburikidza nekutarisana takatarisana, tinogona kunzwisisa zvirinani zvavanoda, kuti tigadzire mhinduro kwayo.
Pakati pevashanyi vakasiyana mafekitori evashanyi, chakandiorora zvakanyanya yaive fekitori imwe yeEPS muIndia uye imwe fekitori yeEPS muTurkey. Iyo EPS fekitori muIndia ndeye yekare fekitori. Ivo vanotenga 40-50 seti yeEPS mafomu kubva kwatiri gore rega rega kugadzira akasiyana mapakeji zvigadzirwa. Kunze kwaizvozvo, ivo vakatengawo matsva EPS michina uye EPS mativi zvikamu kubva kwatiri. Tave tichishanda pamwe kweanopfuura makore gumi uye takavaka hushamwari hwakadzika kwazvo. Ivo vanovimba nesu zvakanyanya. Kana vachida zvimwe zvigadzirwa kubva kuChina, vanogara vachitikumbira kuti tivape. Imwe yeTurkey chirimwa zvakare ndeimwe yekare uye yakakura EPS zvirimwa muTurkey. Vakatenga zvikamu gumi nematatu EPS Shape Molding Machines, 1 EPS Batch Preexpander uye 1 EPS Block Molding Machine kubva kwatiri. Ivo vanonyanya kuburitsa EPS kushongedzwa, kusanganisira EPS cornices, EPS siringi uye EPS yekushongedza mitsara neyekunze yekupfeka. EPS cornices ane akasiyana magadzirirwo anoshandiswa emukati imba kona mitsara, EPS siringi mabhodhi anoshandiswa zvakananga kune yemukati imba siringi. Izvi zvekushongedza zvinhu zvakarongedzwa muhurongwa uye zvinogara zvichitumirwa kuEuropean uye Middle-East nyika. Mimwe michina yakarongedzwa zvakare muchidimbu chimwe chete kana zvidimbu zvidiki pamwe chete pakutengesa zvakare kutengesa. Rwendo rwakanaka chaizvo uye tiri kufara kwazvo kuti takabatana nemakambani makuru akadaro.
Muna 2020, nekuda kwehutachiona hweCorona, tinofanirwa kudzima zviratidziro zvakasiyana siyana zvekunze uye tishandure kutaurirana pamhepo. WHATSAPP, WECHAT, FACEBOOK inotibvumidza kuti titaurirane nyore nyore nevatengi chero nguva. Kunyangwe vatengi vasingakwanise kuenda kuChina kuzotishanyira, tinogona kugara tichiita mavhidhiyo kana mavhidhiyo mafoni kuratidza fekitori yedu uye zvigadzirwa chero pazvinenge zvichidikanwa. Basa redu rakanaka rinogara riripo. Ehe, isu tinotarisira nemoyo wese kuti iyo CORONA inomira munguva pfupi, saka vanhu vese vepasi rose vanokwanisa kufamba vakasununguka uye hupfumi hunogona kudziya.
China Yakanaka Jordan 2013
Iyo 17 # Vietnam International Plastiki & Rubber Maindasitiri Exhibition
China (Turkey) Trade Fair 2019 MuIstanbul Expo Center